पर्यटन क्षेत्र आर्थिक र प्राकृतिक रुपमा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र होः व्यवसायी पन्त-Setoghar
रामचन्द्र पन्त-निर्देशक* होटल बृहस्पति तथा होटल बाग्मती
वि. सं. २०४६ मा लमजुङबाट एसएलसी उत्तीर्ण भएपश्चात् काठमाडौं प्रवेश गरेका रामचन्द्र पन्त आफ्ना दाइ संलग्न रहँदै आएको होटल व्यवसायमा नै जोडिएर काम गरे । काठमाडौंमा रहँदा उनले दाइको होटलमा रहँदा होस्, जागिरको रुपमा काम गर्दा होस् वा आफैं व्यवसाय सञ्चालन गर्दा होस्, विभिन्न भूमिकामा रही कुनै न कुनै रुपमा होटल क्षेत्रलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको आधार मात्र बनाएनन्, यस क्षेत्रलाई माथि उठाउन व्यक्तिगत वा व्यावसायिक तवरबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म रोजगारी सृजना र लगानी प्रवद्र्धनका लागि समेत काम गर्दै होटल बृहस्पती र बाग्मती दुवै गरी ७० जनालाई रोजगार दिन सफल भएका छन् । त्यहि अनुपातमा नेपाल सरकारलाई समेत राजश्वमा समेत राम्रो वृद्धि गरिरहेका छन् । पन्त भन्छन्, तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने व्यवसाय गर्नका निम्ति धेरै चुनौतीहरुले हामी व्यवसायीहरुलाई घेरेर आएको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा खेरी नेपालमा व्यवसायी गर्नका निम्ति धेरै नै असहज परिस्थिति रहेको समेत पन्तको व्यवसायीक अनुभव रहेको छ । तर पनि निराश भने खानु हुन्न, पन्त थप्छन्, ‘नेपाल सरकारले म जस्ता धेरै व्यवसायीहरुको मन जित्ने खाल्को पर्यटन क्षेत्रमा मात्रा होइन सबै व्यवसायीहरुलाई केही थोरै राहत हुने खालको नीति नियम ल्याउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ । अनि व्यवसायीहरुलाई पनि आनन्द महसुुुुस हुन्छ । ताकि आफूले तिरेको कर सहि ठाउँमा खर्च गरेको छु भनेर । यसतर्फ अहिले नेपाली जनताको मन जितेर निर्वाचित भएको दुई तिहाईको सरकारबाट गम्भिरताको साथ हेरिनुपर्छ ।’
आफूले उपलब्ध गराउने सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पन्तले लामो समयको अनुभव पश्चात् वि.सं २०६८ देखि आफैंले होटल बृहस्पति सञ्चालन गरेका हुन् । लमजुङमा वि.सं २०२८ मा जन्मिएका उनी नेपालमा होटल तथा पर्यटक क्षेत्रको सम्भावना अत्यन्त राम्रो भएर नै आफूले पर्यटन क्षेत्रमा केही थोरै भए पनि विकास गर्नका निम्ति पर्यटन क्षेत्र नै रोज्न गएको कुरा समेत पन्त बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा पर्यटन क्षेत्र प्राकृतिक रुपमा नै राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यद्यपि यो क्षेत्र जुन रुपमा व्यवस्थित र गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । यसमा व्यावसायिक र नेपाल सरकार सम्बन्धित सरोकार दुवै पक्षबाट विभिन्न कमजोरीहरु हुँदै आएका छन् । यद्यपि अहिले सम्म यस क्षेत्रमा रहँदै आएका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै अघी बढ्ने कार्यमा भने सरकार पक्ष एवं व्यवसायीहरु कसैले पनि पहल गरेको भने पाईदैन ।
पर्यटनमा अवसर र सम्भावना बारे पन्तकाे धारणा
नेपालमा सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताको साथ लिएको कुरा बताउँदै आएको छ । यद्यपि यसको निम्ति अहिले सम्म राज्यले जुन रुपमा पहल गर्नुपर्ने हो, ती पहलहरु भने हुन सकेका छैनन् । सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा अहिले सम्म नारा र भाषणमा मात्रै सीमित राखेको हामीले महसुस गरेका छौं । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन राज्य पक्षबाट सोही बमोजिम विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु हुनुपर्ने जरुरी छ । साथै पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न राज्य पक्षको अग्रसरतामा व्यवस्थित तवरले सडक निर्माण तथा एयरपोर्ट लगायतका ठूला पूर्वाधारको अलावा व्यवस्थित पार्किङ, शौचालय, आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध लगायतका कार्यहरु समेत गर्नु जरुरी छ ।
यद्यपि अहिले सम्म यस्ता कुराहरुको निर्माणमा राज्य खासै गम्भिर बन्न सकेको पाईंदैन । अहिले सम्म राज्यले पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा यसको गुणस्तरीयतालाई विशेष प्राथमिकताको साथ उठाउन सकेको पनि छैन । जसले गर्दा नेपालमा निर्माण हुने सडक समेत छोटो अवधिमा नै बिग्रने अवस्था समेत रहँदै आएको छ । न्यूनतम मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तरीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा समेत राज्यले विचार गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर राज्यले विकासमूलक तथा प्रवद्र्धनात्मक कामहरु सञ्चालन गरेको भए नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझ गुणस्तरीय बन्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो ।
प्रकृतिको बरदान भएको भूमी हो तर नेपाल आफैंमा प्रकृतिको वरदान हो । यहाँका सुन्दर दृश्यहरुको अवलोकनकै लागि विदेशी पर्यटकहरु नेपालमा आउने गर्दछन् । यद्यपि यहाँका प्राकृतिक संरचनाको अलावा अब हाम्रो ध्यान भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले ती संरचनाको संरक्षण र व्यवस्थापनको अलावा सहज तवरले ती क्षेत्रमा पुग्न उचित बाटोघाटो र अन्य आवश्यक कुराहरुको पनि प्रबन्ध गर्नुपर्छ । हाम्रा प्राकृतिक संरचनाहरु सुन्दर हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन नसकेको कारण अहिले भने हाम्रा सडकहरु हिलो र धूलोले नै ढाकिएका छन् । जसले गर्दा हाम्रो पहिचान गुमेको अवस्था छ । यहाँको अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ । हाम्रो प्रकृति समेत तुलनात्मक रुपमा अहिले निकै नै प्र्रदुषित बनिसकेको छ । काठमाडौं शहर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रदुषित शहरको रुपमा नै परिचित बन्दै गएको छ ।
म आफैंले पनि अमेरिका र भारतबाट आएका पर्यटकहरुलाई पोखरा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, जनकपुर लगायतका ठाउँहरुमा भ्रमणको लागि पठाउने क्रममा उनीहरुले हामीहरुबाट पाएका सेवा र प्राकृतिक हिसाबले राम्रो सन्तुष्टि लिएपनि यहाँको बाटोघाटो, भौतिक अवस्था, अव्यवस्थित बसोबास र व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीको हिसाबले भने नेपालीहरुले अवस्था निकै कमजोर रहेको (झण्डै जनावरहरुकै जीवनशैलि बाँचिरहेका बाँचिरहेको) बताए । उनीहरुको त्यस कुरालाई म आफैंले पनि नकार्न सकिन । म घुमफिरको लागि विभिन्न बाह्य मुलुकहरुमा जाने क्रममा पनि देखेको छु । ती देशहरु कति व्यवस्थित छन् । कृत्रिम संरचनाहरुलाई समेत निकै नै महत्वका साथ लिई जिम्मेवार बनेको कारणले नै ती देशहरुले प्रगति गर्न सकेको कुरा मैले महसुस गरेको छु । यद्यपि नेपालमा भने भइरहेको प्राकृतिक संरचनाहरुलाई व्यवस्थित र सुसंस्कृत बन्नुपर्नेमा त्यसको लागि पहल गर्न सकेका छैनौं । जसले गर्दा हाम्रो समग्र अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनको दृष्टिकोणले नेपाल
साँच्ची नेपालमा आउने पर्यटकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पर्यटक आफूले भुक्तानी गरेको शुल्कबाट उपलब्ध सेवा प्रति उनीहरु सन्तुष्ट छैनन् । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा यात्राको क्रममा सहज रुपमा शौचालयको पहुँच अहिले पनि उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन । ठाउँ–ठाउँमा स्वस्थकर खानेपानी र खाना समेत उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा नेपालमा आएर फर्किएका पर्यटकले नेपालको बारे त्यति राम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको पाइदैन । यस्ता न्यूनतम सेवा सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्ने कार्य राज्य मातहत हुनुपर्ने कार्यहरु हुन् । निजी व्यवसायी आफूले उपलब्ध गराउने सेवाको लागि मात्र जिम्मेवार रहन्छ, त्यसमा निजी व्यवसायीहरुले उपलब्ध गराएको सेवा र सत्कार तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । यद्यपि जबसम्म राज्य पक्ष नै न्यूनतम आवश्यकताको रुपमा रहेका यस्ता कुरामा जिम्मेवार बन्दैन तब सम्म व्यवसायीहरु जति नै जिम्मेवार बनेपनि यस्ता कुराहरुको वृहद पहुँच विस्तार गर्न भने सकिँदैन ।
कस्तो होटल हो होटल बृहस्पति ?
नक्साल स्थित साथिहरुसँग र पारिवारीक तरिकाबाट यो होटल मध्यम वर्गिय नेपाली तथा विदेशी पाउनाहरुलाई उपयुक्त तथा आनान्दको रहेको छ । हाल उक्त होटल बृहस्पतीमा ४० ओटा कोठाहरु अत्यन्त राम्रो र सजावटबाट सिँगारिएर निर्माण भएका छन् । आगामी दिनमा यस होटलको लगानी विस्तार गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि थप पहल गर्ने आफ्नो योजना रहेको होटल सञ्चालक पन्त बताउँछन् । हाल यस होटलमा करिब ३० जना कर्मचारीहरु सेवामा संलग्न छन् । यस होटलको अलावा पन्तले तिरुपति होलिडे टुर्स एण्ड ट्राभल समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस ट्राभलले अनलाइनमा आधारित रही विदेशबाट आफ्नो चाहना बमोजिमका पर्यटकहरु नेपालमा भित्र्याउनका निम्ति महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छन् पन्तले ।
यसको अलावा होटल बाग्मतीमार्फत पनि पन्तले स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरुलाई राम्रो सेवा दिँदै आइरहेका छन् । काठमाडौंको बाक्लो वस्तीमा समेत होटल बहस्पती र होटल बाग्मतीले आफ्नो छुट्ट्रै पहिचान बनाएको छ । एकचोटी ग्राहकहरु उक्त होटलमा आए पश्चात कहिले फेरी होटलमा जाउँ जाउँ जस्तो वातावरणको उक्त दुवै होटलमा त्यो खालको विशेषताहरु रहेको छ । यो खालको विशेषताहरु अन्य होटलहरुमा पाईदैन । यस अर्थमा समेत यी दुई होटलहरुको आ–आफ्नै खालको विशेषताहरु ग्राहकहरुका मन भित्र सधैका लागि न्यानो माया चीनोका रुपमा रहिरहने छन् ।
कस्तो होटल हो बाग्मती ?
काठाडौंको अत्यन्त भीडभाड हुने र सबै क्षेत्रले अत्यन्त राम्रो मानिने ठाउँ गौशाला पिङ्लास्थान स्थित मन मिल्ने साथिसँगकाे सहकार्य र पारिवारीक वातावरणमा संचालनमा रहेको होटल बाग्मतीमा ३० वटा डिलक्स कोठाहरु अत्यन्त राम्रो र सजिएर निर्माण भएका छन् । यो होटल नेपालमा तिर्थ यात्रामा आउने मध्यम बर्गिय तथा विदेशी पाउनाहरुका लागि अत्यन्त उपयुक्त रहेको छ । जहाँ पाउनाहरुलाई किफायती दरमा उच्चस्तरको खानाका विभिन्न खालका सेवाहरु प्रदान गरिनेछ । यस होटलमा २० जना कामदारहरु सेवामा संलग्न रहेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न हुँदाका शुरुका दिनमा आफू अहिलेको अवस्थामा आउन सकुँला भन्ने सोचविचार नै नगरेका पन्त आफ्नो कर्मपथमा निरन्तर रुपमा लागिरहँदा यो सफलता हासिल भएको बताउँछन् । केही आरोह–अवरोह पार गर्दै अघी बढ्दा उनी यो अवस्थामा आएर समाजमा एक उदाहरणीय व्यक्तिको स्रोतको रुपमा पन्त सफल भएका छन् ।
पर्यटनमा अबको सम्भावना
विगतमा नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले भने नेपालबाट युवाहरु कृषिबाट पलायन भएका छन् । यद्यपि अहिले नेपालमा रहेर व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये अधिकांश पर्यटनमा आकर्षित बन्दै गएका छन् । पर्यटन अन्तरगत विभिन्न क्षेत्रहरु जोडिएका हुन्छन् । भनिन्छ, एउटा पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेको खण्डमा त्यसबाट १० देखी १५ जनालाई रोजगारी सृजना हुने अवस्था रहन्छ । पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन त्यस क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीको भूमिका समेत निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । सोही बमोजिम गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको योजना सहित अहिले विभिन्न तालिमप्रदायक संस्थाहरुले छोटो तथा लामो अवधिका तालिमहरु समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यद्यपि ती संस्थाहरुबाट उत्पादन भएका जनशक्ति नेपालमा कम र विदेशमा बढी मात्रामा गइरहेको अवस्था छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा आउनको लागि प्रेरणा
म मेरो माइला दाईको प्रेरणाले यस क्षेत्रमा संलग्न भएको हुँ । दाई आफैं पनि होटल व्यवसायी नै हुनुहुन्थ्यो । मेरो बाल्यकाल गाऊँमा नै बितेको हो । एसएलसी पश्चात् म काठमाडौं प्रवेश गरेको हुँ । म सबै प्रति समभाव राखेर काम गर्ने प्रकृतिको व्यक्ति हुँ । हामीले परिवारबाटै राम्रो संस्कार सिक्ने अवसर पायौं । सकेसम्म सबैको भलो नै गर्न सकियो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरेको कारण नै मलाई व्यावसायिक रुपमा समेत माथि आउन सहज भएको मैले अनुभव गरेको छु । साथै आपसी सामुहिक भावले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बमोजिम नै म निरन्तर रुपमा अघी बढिरहेको छु । हाल मैले लायन्स क्लव, नाट्टा, हान लगायतका संस्थाहरुमा सदस्यता लिएको छु ।
विदेश भ्रमणबाट सिकेको अनुभव
मैले विदेशमा विभिन्न मुलुकहरुको भ्रमण गर्दा कृत्रिम संरचनाहरुलाई देखाएर पर्यटकहरुलाई पर्यटकहरुलाई मन्त्रमुग्ध पारेका छन् र ती देशहरुले छोटो अवधिमा नै राम्रो प्र्रगति गरेको देखेको र सुनेको छु । यद्यपि नेपाल भने प्राकृतिक रुपमा राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै यहाँको स्थिर राजनीति, दिगो विकास निर्माण र योजनाको अभाव भएका कारण नेपाल अहिलको अवस्थामा रहन पुगेको पन्तको अनुभव रहेको छ । नेपालका अन्य संघ–संस्थाहरु समेत अहिले राजनीतिक रुपमा ध्रुविकरण भएका छन् । जसले गर्दा नेपालका अधिकांश संस्थाहरुले आफ्नो योजना बमोजिमका गतिविधिहरु अघी बढाउन नसकेका कुरा पन्त बताउनुहुन्छ ।
कुनै पनि व्यवसायमा सफल हुनको लागि व्यवसायी आफू इमान्दारीता, लगनशिलता र धैर्यता हुनुपर्छ । सबैसँग मिलनसार र सबैको प्र्रगति होस् भन्ने सोच राखेर अघी बढ्न तथा सामूहिकतामा काम गर्ने परिपाटी समेत विकास हुन सकेको खण्डमा नै हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ ।